Cayaaraha Dowlad-Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Cayaaraha Dowlad-Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir
Isboorti waxaa loo qabtaa si loo dhiirri geliyo isdhexgalka bulshada. Waxaa shaqo loogu abuuraa cayaartooyda, macallimiinta iyo tababbarayaasha, Madaxda iyo maamulayaasha iyo inta kale ee shaqooyinkooda ama ganacsig oodu uu toos ugu xiran yahay cayaaraha. Waxaa laga soo saaraa lacag. Waxaa shacabka looga dhigaa madaddaalo ay xiiseeyaan oo farxaddooda ka qeyb qaadata. Wuxuu wax ka taraa caafimaadka inta cayaarta iyo inta ku madaddaasha.
Waxaa ka soo bixi jiray cayaartooy awood leh oo hufan. Inta badan kubadda cagta waxaa ugu adkaa cayaartooyda Jubbada Hoose iyo Shabeellada Dhexe oo iyadu lahayd naadi heerka koowaad ah. Kubbadda Koleyga waxaa ugu wanaagsanaa Togdheer iyo Goballada Dhexe oo ay u cayaari jireen militeri badan oo fariismo ku leh. Kubbadda Koleyga Woqooyi Galbeed iyo Hiiraan waxay dhigi jireen wacdaro. Maalinta ay cayaarayaan waxay taageerayaashoodu ugu sawaxan badnaayeen marmarna ay is fara saari jireen Togdheer iyo Baay. Banaadir inta badan cayaaraha oo dhan waxaa mid walba u safan jirtay koox culus.
Halkaas ayaa lagu sii dhisi jiray jirkooda, lagu soofeeyn jiray farsamadooda, lagu kordhin jiray carbiskooda, sare loogu qaadi jiray adkeysigooda iyo kalsoonidooda cayaaryahannimo, laguna kobcin jiray hammigooda guulaha ay tahay in ay soo hooyaan. Markaa ka dibna, intooda karti iyo farsamo cayaareed ay gaarsiiso waxay ku biiri jireen Kooxda Qaranka ee noocooda cayaareed si ay fagaarayaasha adduunka ugu soo saftaan oo ay u matalaan Soomaaliya. In badan markii galab walba aan tababbarka kala qeyb galayay Kooxda Kubbadda Koleyga ee Batroolka waxay igu fogeeyeen in aan safto tartammada, anigana culeys iga haystay shaqooyin kale dartood samir uma yeelan oo waan isaga tegey.
Previous articleXayiraadda Sh. Axmed Laga Qaaday Waa Xayiraad Dhaqaalaha iyo Horumarka Soomaaliya Laga Qaaday
Next articleTaageerada Millateri ee Masar u fidisay Soomaaliya waa baal cusub oo u furmay xiriirka labada dal